Soo dejisan Comodo Antivirus 12.2.2.7036 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Comodo Antivirus
Comodo Antivirus – software casri ah oo casri ah oo loogu talagalay in lagu ogaado loona bareeyo hanjabaadyo noocyo kala duwan ah. Nidaamku wuxuu taageersan yahay taraafka deg-dega ee goobaha muhiimka ah iyo xasuuska kombiyuutarka, jeeg buuxa ee dhammaan faylasha iyo faylasha, iyo baaritaanka daruuraha ee qaybaha ugu muhiimsan ee nidaamka, iyadoo ku saleysan qiimeynta faylasha. Comodo Antivirus waxay ka kooban tahay qayb ka mid ah falanqaynta xogta akhlaaqda ah ee ka soo horjeeda codsiyada khatarta ah ee isku dayaya in ay is-ku-rakibaan nidaamka. Comodo Antivirus waxay kormeertaa nashaadyada nidaamka iyo ficillada dhammaan hababka socodka iyada oo la adeegsanayo habab isdifaac ah oo isku-dhafan oo ogaanaya oo ka warbixinaya hawlaha shaki laga qabo kombiyuutarka sida isbedelada aan la fasixin ee faylasha la ilaaliyay iyo diiwaanka. Comodo Antivirus waxay si otomaatig ah u gashaa faylasha aan la garanayn ee degaan shakhsiyadeed oo gooni ah si ay u ordo oo ay u eegaan iyaga oo aan waxyeellayn kombuyuutarka
Baaritaanka antivirus ee baaritaanka
Hubinta diiwaanka iyo faylasha nidaamka
Teknolojiyada HIPS iyo Viruscope
Soo dejisan Comodo Antivirus
Faallo ku saabsan Comodo Antivirus
Comodo Antivirus Xirfadaha la xiriira